မြန်မာသံတော်ဆင့်: မြန်မာ့လွပ်လပ်ရေးမှာ ဖခင်ရှိသလား - "နတ်နေကိုင်း" ကို တက်၍ "ချိုင်" ခြင်း
Posted by Myint Shwe at 7:54 AM
Read U Hla Oo's series "Burma In Limbo" if anyone wants to know who really was Aung San and what did actually happen to Burma just before and just after the Second World War.
အလွန် မှန် ကန် ပါပေ တယ်..နတ်နေ ကိုင်းကိုတော့မထိသင့်ပါ
If they have confidence, they will not use Gen. Aung Sann's image to organize people. Aung Sann is Aung Sann. Other will never be Aung Sann ( Our Gen.Aung Sann).
အောင်ဆန်းကို ဗမာအစစ်ပါလို့ ဘယ်သူပြေနိုင်သလဲ? ဇစ်မြစ်ကော ချန်ထားခဲ့ကြအုန်းမှာလား
မြန်မာ့လွပ်လပ်ရေးမှာ ဖခင်ရှိသလား - "နတ်နေကိုင်း" ...